Onye na-ebu ọkụ na-ebu ihe na-ebu ọkụ, Nkpuchi Rubber, Silicone Membrane - Cayce May
ezi obi na ntụkwasị obi na-adọta ndị ahịa n'ụwa niile
Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd emi odude ke tụụrụ Yangtze River Delta akụ na ụba mpaghara geometric center, azụ Yangtze osimiri, Taihu gbakwasara. N'ebe ọwụwa anyanwụ ruo na etiti akụ na ụba China-Shanghai kilomita 150, ọdịda anyanwụ site na isi obodo ochie-Nanjing kilomita 150, n'ebe ndịda ruo Wuxi Sunan International Airport dị kilomita iri ise. Jinghu na yanjiang okporo ụzọ awara awara abụọ na-ezukọ na mpaghara jiangyin, akwa ụgbọ mmiri jiangyin Yangtze na-agwa ugwu na ndịda nke osimiri Yangtze, bụ ọdụ ụgbọ njem dị mkpa na Osimiri Yangtze. Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd dị na mpụga ọwụwa anyanwụ nke ogige ntụrụndụ nke ụlọ ọrụ.
Mgbe ị nọchara na ụlọ ọrụ silicone, ị ga ...
Mgbe ha nọrọ na ụlọ ọrụ silicone ruo ogologo oge, ọtụtụ ndị ahịa ga-anụ ajụjụ a: ngwaahịa silicone nwere otu nha ma ọ bụ ọbụna otu ụdị ahụ nwere ọnụahịa dị iche iche. N'isiokwu a, ọ dịbu na enwere m nsogbu nwa oge. Iji dozie nsogbu a, na mgbakwunye na learnin ...
Treatmentzọ ọgwụgwọ dị na saịtị maka ibu ibu ...
1. Dị ka nha nke njem njem, a na-ekewa ya: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 modelsdị ndị a na-ejikarị eme ihe dịka B1400 (B na-anọchi na obosara, na millimeters). Ka ọ dị ugbu a, ikike kachasị ukwuu nke ụlọ ọrụ bụ belt ebufe B2200mm. 2. Dị ka dị iche iche ị ...